Ikhasi lasekhaya • Ukumodareyitha kweLizwe
———- IPHEPHA ———-
Iworkshop: ngemodeli esuka ku-A ukuya ku-Z
Uvavanyo kunye neenkcazo-ntetho
Igalari yemisebenzi egqityiweyo
I-DIY: Ukwenza imodeli ka-DIY
---- Ivenkile =
IBlog: UKUFUMANISA IMFANEKISO KWIMvelaphi
Icandelo leBhlog: izifundo zemodeli, izifundo, izikhokelo, amanqaku anomdla.
INGXELO YOKUGQIBELA: IIMODYULI ZEMODYULI
Ivenkile ethengisa izinto ezinophawu lwentengiso yethu: ezona mveliso zisemgangathweni ophezulu zeemodeli.
Uluhlu lweevenkile ezisemthethweni kunye neevenkile zokuthengisa ezinikezelwa yiModeliers yeHlabathi
Ukwenza kube lula ukuhamba ngebhlog, amangeniso akuyo aqokelelwe ngokweebhloko zilandelayo:
Ukunikezelwa kweendlela zobumdaka kunye nokunxiba imizila kwimodeli Ukusebenza nemodeli ukusuka kwinqanaba lokubonakala kwento yokudlala ukuyila inkohliso yenyani.
Yonke into malunga nomsebenzi osisiseko wemodeli. Malunga nokuncamathisela, ukuqhubekeka kunye nokupeyinta, ngokwe-maxim yethu: ukwenziwa kwemodeli kwasekuqaleni.
Ubudlelwane bomsebenzi kunye nemodeli ukusuka kusiko lokuqala ukuya kwigalari yokugqibela.
Icandelo lebhlog elinikezelwe kwizihloko zemodeli: iikholamu, iingxelo, udliwanondlebe. Iingxelo ezivela kwimisitho yomzekelo. Kancinci malunga nomkhosi.
Ukunikezelwa kweebhokisi ngaphambi kokuncamathelisa, iimvavanyo zeekhemikhali kunye nezixhobo zemodeli. Oko sibeka izandla zethu, ngokujolileyo nakwinqanaba.
Iigalari zokugqibela zeeProjekthi ezigqityiweyo. Zonke iimodeli endizisebenzeleyo nezigqitywe ngempumelelo zinendawo kweli candelo.
Yintoni entsha kwihlabathi leModeliarski. Yonke into malunga nokutshintsha nokwenzekayo kumaphepha ewebhusayithi, kodwa nangeendaba kunye nezaziso zentengiso.
Kweli candelo, sibonisa izinto ezincinci ezenziwe ekhaya, izixhobo kunye nezixhobo eziluncedo kwiimodeli kunye nabathanda i-DIY.
Ungeniso lwebhlog zamva nje
Yintoni le sibhala ngayo ngoku, yintoni esisebenza kuyo:
Ioyile emdaka Wash 'ami acc. inkosi uMirek Serba
ioyile Wash ezi ziimveliso zethu esizingca ngazo. Ngubani uMirosław Serba kwindawo yemodeli yasePoland, akukho mfuneko yokuchaza. Indoda enetalente enkulu, imodeli ebonisa umbono, kunye nemodeli enkulu [...]
Ukuphononongwa kwiGrot ngokulandelelana
Enkosi kumbhali kwaye siyakumema ukuba umlandele kumajelo eendaba: I-PAYPAL ME: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotorderly.cupsell. pl / ISIQINISEKISO SE-LINK: https://discord.gg/jxzq2rx IPHEPHA KWI-FACEBOOK: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG KWI-BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Umboniso bhanyabhanya omtsha kwisiteshi seAttom
Namhlanje, ezinzulwini zobusuku, enye ividiyo kwitshaneli yeAgtom yabhabha isuka kulwakhiwo lwetanki ye-7TP - IBG 1:35, iindaba ezivela kwisitali se-IBG. UTomek wabonisa ubuchule bokufaka ipeyinti wash ibhrashi yomoya. Enkosi ngokukhetha [...]
ZIBONELE ZONKE IZithuba kwiBlog
Jonga ukuba ababhalisi bethu bafunda ntoni malunga newebhusayithi yethu:
Ukufaka isicelo sombala kwiimodeli
Uyenza njani into yokwenziwa kwempahla kwimodeli
Inkqubo yesiponji yokufakela-ilula kwaye iyasebenza!
Abaququzeleli beworkshop abavela eHobbyZone
ayifanele, ayifanele? -Ukuphononongwa
indlela yokukhawulezisa ngokukhawuleza nangokulula kwimodeli enomdla
Unayo iakhawunti kaFacebook? Joyina iqela lethu Iimodeli kunye nabalandeli beMozulu!
Ukuba phakathi koluntu lithuba elihle lokuzibonakalisa, funa inkuthazo kwaye ufune iingcebiso. Yenza umhlobo omaziyo, ulandele kwaye ujoyine iingxoxo. Khumbula, nabani na ongabuzi mibuzo akafumani lwazi. Sikwacwangcisa ukhuphiswano lomjikelo kunye namabhaso kunye neNdebe yeHlabathi yoKulinganisa iNdebe kwiQela.
Nantsi into abayithethayo ngathi:
Ngokuqinisekileyo ndiyacebisa. Icandelo lomsebenzi olungileyo, ingcebiso yeengcali, izicwangciso zokwakha kunye neegalari ezintle kuwo onke amanqanaba enkqubela phambili yemodeli.
Uluvo oluvela kuFacebook
Eyona nto ibalaseleyo kwi-PL! Iwebhusayithi, ivenkile, umnikelo olungileyo. Ndincoma ukujoyina iqela, inkcubeko ephezulu.
Iqela elikhulu nelinomdla kakhulu elinemibono enomdla kakhulu
Amagama ambalwa malunga nombhali
Ukwenza imodeli ngumsebenzi ondidlileyo ebukhwenkweni bam. Ndihlala ndikhulisa ukuthanda kwam, okukhokelele kwiModeliarski yeHlabathi: ilizwe apho ndinokudibanisa umdlalo wam kunye nobomi bam bobuchwephesha. Apho umgangatho uphambili kwaye izizathu zingaphandle kombuzo.
Umnini weNkampani yeModeliarski Świat
Okungakumbi malunga nenkampani
Sisebenza ngo-09-17 kwi-UTC + 01: 00 / UTC +02: 00 kwindawo yexesha
Unxibelelwano lwamanye amazwe
Thumela i-imeyile kule dilesi ilandelayo:
UFb wethu weFanpage
© I-2022 yeModeli yeHlabathi. Yakhelwe kusetyenziswa iWindowsPress kunye Umxholo weMesmerize